Nkume nke Verdelite bụ tourmaline na-acha akwụkwọ ndụ - vidiyo
Nkume nke Verdelite bụ greenmal tourmaline. Anyị na-eme ọla ndị ọdịnala na verdelite gemstone setịpụrụ dị ka ọla ntị, mgbaaka, olu, mgbaaka ma ọ bụ ihe olu. Verdelite pụtara.
Naturalzụta ezigbo verdelite na ụlọ ahịa anyị
Ọ bụ ọtụtụ tourmaline kpọmkwem akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mgbe ụfọdụ a na-ewere ya dị ka tourmaline na-acha akwụkwọ ndụ na ahia. Na agba sitere na site na-enwu ọkụ eletrik na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị nwayọọ na-eme ka ọ chọọ nnukwu nkume na ezinụlọ ezinụlọ nkume.
Ngwongwo silicate nke na-edozi mmiri na-ejikọta ihe ndị dị ka aluminom, ígwè, magnesium, sodium, lithium, ma ọ bụ potassium. Ọ nkewa dị ka ọkara dị oké ọnụ ahịa nkume.
Green tourmaline bụ mgbanaka cyclosilicate nke isii nwere usoro kristal trigonal. Ọ na - apụta dị ka ogologo, dị gịrịgịrị na kristal nke na - eme ka a na - ahụkarị nke nwere akụkụ atọ, yana mgbe ọ na - eche ihu. Thedị nkwụsị na njedebe nke kristal bụ mgbe ụfọdụ asymmetrical, nke a na-akpọ hemimorphism. A na-ahụkarị obere kristal pịrị ọnụ dị na granite mara mma nke a na-akpọ aplite, na -emekarị ihe ndapụta yiri radiis. A na-ahụta Verdelite tourmaline site na ya ụzọ atọ dị n'akụkụ ya. Ọ dịghị ihe ọzọ na-ahụkarị ịnweta nwere akụkụ atọ. Prisms na-eche ihu mgbe mgbe iji mgbatị dị arọ nke na-ewepụta mmetụta nke atọ. Green tourmaline anaghị adịkarị oke.
Ọ bụ nnukwu nkume iji nye ike ogbugbu, ike na-aga n'ihu, ikike iche echiche dị mkpa iji mata nke kacha mma. Ọ ga-adọta akụ, ịhụnanya na ahụike nke onye nwe ya chọrọ. Okwute ahu g’enye aka ịsụ ụzọ nke ihe ọma. Ọ bụ nnukwu nkume ịtụgharị na-agbakwunye na mgbakwunye. O ga eweputa ihe oma diri gi. Nkume a na-enyekwa gị ohere ịma aka n’ihe ọhụrụ. Ga-enweta ohere iji gafee oke mgbochi. Ọ na - egbochi gị inwe afọ ojuju na ọnọdụ ugbu a. Ọ bụ nnukwu nkume na-agbasawanye ohere ọ ga-eme n'ọdịnihu.
Buyzụta ezigbo verdelite na ụlọ ahịa anyị
Anyị na-eme ọla ọdịnala na verdelite gemstone setịpụrụ dị ka ọla ntị, mgbaaka, olu, mgbaaka ma ọ bụ ihe olu.
Kedu ihe eji eme verdelite?
Green Tourmaline dị mma maka ebumnuche ọgwụgwọ, ebe ọ nwere ike ilekwasị anya ike ọgwụgwọ ya, na-ehichapụ aura, na iwepụ ihe mgbochi. A na-ejikarị Green Tourmaline meghee ma megharịa Obi chakra, yana inye udo na ịdị jụụ na obi na usoro ụjọ.
Ebee ka ịzụta verdelite?
Anyị na-ere verdelite na ụlọ ahịa anyị
Ndi verdelite di obere?
Isi ego ndị na-agba ọsọ tourmaline dị na Brazil, Namibia, Nigeria, Mozambique, Pakistan na Afghanistan. Ma tourmalines na-acha akwụkwọ ndụ nke ezigbo agba na nghọta bụ ihe na-adịghị ahụkebe na nkume ọ bụla dị egwu. Ma ọ bụrụ na, na mgbakwunye, ha enweghịkwa itinye, ha na-achọsi ike nke ukwuu.
Edere ọnụ bara uru?
Green tourmaline dị oke ọnụ mgbe ọ nwere ụfọdụ acha anụnụ anụnụ na ya ma ọ bụ na-apụta dị ka emerald dịka na chrome tourmaline.